Netherlands inodzoreredza COVID-19 zvirambidzo pakati pespike nyowani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Netherlands Kuputsa Nhau » Netherlands inodzoreredza COVID-19 zvirambidzo pakati pespike nyowani
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weDutch akati nyika yekugamuchira vaeni uye yehusiku inofanirwa kuvharwa nekuda kwekukwira kwezviitiko zvehutachiona hwakanyanya hweDelta hutachiona.
Netherlands iri kudzorera COVID-19 zvirambidzo zvemakirabhu ehusiku, maresitorendi nemitambo yemimhanzi.
Zvibvumirano zvitsva zvakaiswa nekuda kwespike muzvirwere pakati pevechidiki.
Ese maresitorendi nemabhawa muNetherlands anovhara madhoo avo kubva pakati pehusiku kusvika 6am zuva rega rega, apo mimhanzi mhenyu icharambidzwa.
Mutungamiri weDutch, Mark Rutte akazivisa kuti hurumende yeNetherlands iri kudzorera zvirango zveCOVID-19 zvemakirabhu ehusiku, maresitorendi nemitambo yemimhanzi nekuda kwenhamba dzinoverengeka dzemakesi matsva e coronavirus pakati pevechidiki.
Iyo yakadzoreredzwa COVID-19 zvirambidzo, izvo zvakasimudzwa June 26, zvichatanga kushanda mangwana mangwanani uye kugara munzvimbo kusvika Nyamavhuvhu 14, Rutte akadaro neChishanu.
Achimira padivi peGurukota rezvehutano Hugo de Jonge, Mutungamiriri akati nzvimbo dzekugamuchira vaeni munyika nehusiku dzinofanirwa kuvharwa nekuda kwekukwira kwezviitiko zvehutachiona hweDelta hwakanyanya.
Rutte akati hurumende ikozvino ichatendera zuva rimwe chete zviitiko zveveruzhinji munzvimbo dzinozadzwa kusvika pazvikamu zviviri kubva muzvitatu, uye vateereri vanofanirwa kuratidza chirwere chavo nehutachiona.
Yese maresitorendi nemabhawa mu Netharenzi inodawo kuvhara magedhi avo kubva pakati pehusiku kusvika 6am zuva rega rega, nepo mimhanzi yepamoyo ichirambidzwa.
Sisitimu yekutengesa matikiti inobvumidza vanhu kuti vasunungurwe kubva kumutemo wekusimudzira magariro achamiswawo kusvika mwedzi unouya, apo hurumende ichaongorora mamiriro ezvinhu.
De Jonge akati kuwanda kwezvirwere munguva pfupi yapfuura kwakabata zvikuru vechidiki, asi akayambira kuti "hazvidziviririke" kuti vakweguru vangatapukirwa kunze kwekunge hurumende yatora matanho.
Mukati mesvondo rapfuura, huwandu hwezviitiko zvitsva zveCOVID-19 muNetherlands zvakakwira ne103% zvichienzaniswa nemazuva manomwe apfuura, ongororo ichangoburwa neNational Institute for Public Health uye Nharaunda inoratidzira.